Izindiza zeSriLankan ziqala kabusha iMoscow - Izindiza zaseColombo ezisuka eDomodedovo Airport
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Izindiza zeSriLankan ziqala kabusha iMoscow - Izindiza zaseColombo ezisuka eDomodedovo Airport
Airlines • Airport • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • I-Russia Breaking News • Izindaba Ezintsha ZaseSri Lanka • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Phambilini iSriLankan Airlines neDomodedovo babambisana kusukela ngo-2011 kuya ku-2015, ithrafikhi yabagibeli yabalelwa kubagibeli abayi-115,000.
Izindiza zeSriLankan zizosebenza indiza eyodwa ejwayelekile yamasonto onke ngoMgqibelo.
Isikhathi sokufika eDomodedovo ngu-4: 30 ekuseni, isikhathi sokuhamba - ngo-7: 15 ntambama
Le nsizakalo izoqala kabusha kusuka ngoJulayi 31, 2021.
Inkampani yesizwe yomoya eSri Lanka, SriLankan Airlines, iqala kabusha izindiza kusuka Isikhumulo sezindiza saseMoscow Domodedovo ukuya eColombo kusuka ngoJulayi 31, 2021. IDomodedovo ukuphela kwesikhumulo sezindiza eMoscow Aviation Hub lapho abagibeli bengandiza ngqo baye kule ndawo.
Umphathi womoya uzoqhuba indiza eyodwa ejwayelekile yamasonto onke ngeMigqibelo. Isikhathi sokufika eDomodedovo ngu-4: 30 ekuseni, isikhathi sokuhamba - ngo-7: 15 ntambama
“Lesi isixhumanisi somoya esibalulekile seSriLankan Airlines njengoba sixhuma ezweni elikhulu kunawo wonke emhlabeni elaziwa nangokuthi elinye lamasiko amakhulu nomlando. Lo msebenzi uzonikeza indlela entsha futhi elula yokuhamba yokuxhuma iRussia Federation kanye namazwe angomakhelwane. Silindele ngabomvu ukwamukela izivakashi zaseRussia eSri Lanka kanye nabagibeli abagibela izindiza zethu eziya eRussia ”, kusho isikhulu sakwa-SriLankan Airlines uVipula Gunatilleka.
Phambilini lo mphathi womoya noDomodedovo babambisana kusuka ngo-2011 kuya ku-2015, ithrafikhi yabagibeli yabalelwa kubagibeli abayi-115,000.
"Njengamanje iColombo ithathwa njengendawo eyingqayizivele eMoscow Aviation Hub", kuphawula umqondisi weMoscow Domodedovo Airport u-Andrey Pavlov. - Ukufika kweSriLankan Airlines emakethe yaseRussia kuzovula amathuba amaningi okuthuthukiswa kwezivakashi emazweni ethu. Sinesiqiniseko sokuthi isipiliyoni sethu sangaphambilini sokuphumelela kobambiswano sizosivumela ukuthi sisebenze ngempumelelo esikhathini esizayo ”.
SriLankan Airlines waba ngumthwali wokuqala esifundeni saseNingizimu ye-Asia ukuthola isilinganiso se-'Dayimane 'ku-Airline Passenger Experience Association (APEX) naseSimpliFlying, okuyizinga elamukelwe lezinyathelo ezengeziwe zokuphepha kanye nokuqapha okuphelele kwenhlanzeko okulandelwe kusukela kwaqala ubhadane lomhlaba. ISriLankan Airlines yinkampani yezindiza ewina imiklomelo nedumela eliqinile njengomholi womhlaba wonke kwezokusebenza, ukunethezeka, ukuphepha, ukuthembeka, nokugcina isikhathi.
Umsebenzi wezokuvakasha nowezokuvakasha wehle cishe u-7% ...
Kuyaphuthuma kusuka kuSuperstar "Vanilla Ice" naku ...
I-African Tourism Board itshele i-Air France, ukuthi siyakuthanda!
UNgqongqoshe Wezokuvakasha Uvakashela Ezokuvakasha Ezincane ...
Amadili okulingana ayimfihlo ashayela ukuvakasha komhlaba wonke kanye nezokuvakasha...
Ukuphathwa KweBiden Kunxuswe Ukusheshisa Ukuvulwa kabusha kwe-US
Izinombolo zabagibeli ziyaqhubeka nokukhuphuka esikhumulweni sezindiza iFrankfurt